Global Voices teny Malagasy » Oman: Fanasivanana tsy nahy ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jona 2018 4:11 GMT 1	 · Mpanoratra Riyadh Al Balushi Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Oman, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Marihina fa tamin'ny 4 Septambra 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tsy toy ny an'ireo firenena sasany mpifanolo-bodirindrina aminy fa tena tsindraindray no sivanin'ny governemanta ireo tranonkala mitsikera ny manampahefana ao Oman.
Misy ireo bilaogy sy ireo sehatra fifanakalozan-kevitra izay mamoaka miharihary ny antontan-taratasin'ny governemanta tafaporitsaka ary manala baraka ireo manampahefana ambony ao amin'ny governemanta, kanefa mampiasa ny lalànan'ny heloka bevava sy ny lalàna mifehy ny fifandraisandavitra Omani itoriana ireo mpanoratra toy izany ny governemanta amin'ny tranga maro raha toa ka mponina ao amin'ny firenena izy ireo . Na dia mbola tsy voamarina aza izany dia manome antoka ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra i Oman. Tsy voasakana mihitsy ireo tranonkala toy ny YouTube, Facebook, Flickr, ary Twitter any Oman.
Ao Oman, manana olana hafa amin'ny sivana izahay. Ny orinasam-panjakana iray antsoina hoe Omantel no misahana ny olan'ny sivana izay manakana ireo tranonkala kisendrasendra indraindray, noho ny fahadisoana ataon'ny olombelona angamba na ny milina – izay tsy fantatray. Na dia tahaka ny olana kiadaladala aza izany tamin'ny voalohany noho ny natioran'ny boaty mainty [tsy misy na inona na inona fantatra ny momba azy] avy amin'ny departemantan'ny sivana, fa raha voasakana ny tranonkala iray dia nofiratsy mihitsy vao mahaverina izany amin'ny laoniny.
Tao anatin'ny roa volana no nahitako fa voasakana  ny bilaogy iray notantanako tao amin'ny lalànan'ny Teknolojia Vaovao tao Oman  raha mbola tany ivelany aho. Volana iray manontolo vao tafaverina tamin'ny laoniny izany rehefa nanao fitarainana ofisialy tany amin'ny Manampahefana Mpandrindra ny Fifandraisandavitra aho mba hanokafana indray ny tranonkalako.
Satria very iray volana aho tamin'ny fifamoivoizan'ny tranonkalako noho ny fanakanana izany ary lany saram-pampiantranoana nandritra ny iray volana manontolo dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny fananana tolotra maromaro ao amin'ny Google toy ny Gmail, Blogger , ary Scholar  voasakana mihoatra ny iray andro noho ny fahadisoana .
Amin'izao fotoana izao dia toa tsy misy fomba ahafahana mihazona an'i Omantel ho tompon'andraikitra amin'ny sivana maro samihafa, afa-tsy ny fitarainana any amin'ny Manampahefana Mpandrindra ny Fifandraisandavitra ao Oman, izay hanome baiko an'i Oman hanokatra indray ny tranonkala, saingy tsy azo heverina ny hisian'ny fanasaziana hafa. Tsy mbola fantatra ny hoavin'ny toe-draharaha sy ny fifehezana ny departemantan'ny sivana satria manomboka ny asany ny mpanome tolotra aterineto faharoa. Antenaina fa hisy ny zavatra hiova.
Mandritra izany fotoana izany dia tsara ny manamarika fa voasakana tao Oman ny tranonkalam-baovao Global Voice Bangla .. inoana fa noho ny fahadisoana. Efa nanoratra tany amin'ny Omantel aho mba hanokafana izany indray, saingy tsy fantatro hoe haharitra hafiriana izany, raha toa ka hovahana indray .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/25/121931/
 tranonkalam-baovao Global Voice Bangla: https://bn.globalvoicesonline.org/